တို.များ … သမ္မတအသစ်တော့ရပြန်ပီ … အရင်တုန်းက သမ္မတကတော့ ဒီလို (great soul ofaprevious minister) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » တို.များ … သမ္မတအသစ်တော့ရပြန်ပီ … အရင်တုန်းက သမ္မတကတော့ ဒီလို (great soul ofaprevious minister)
တို.များ … သမ္မတအသစ်တော့ရပြန်ပီ … အရင်တုန်းက သမ္မတကတော့ ဒီလို (great soul ofaprevious minister)
Posted by အာဖျံ ကွီး on Feb 9, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Gossip, Rumor, History |2comments
သူများအကြောင်းလဲမပြောတတ်ပါ။ စပ်မိစပ်ရာ ကွိစိကွစ
သမ္မတအုပ်ချုပ်သော ပါလီမန်ခေတ်အချိန်ကဖြစ်၏။ ရန်ကုန်မှထင်ရှားသော နိင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်သည်လဲ သမ္မတအဖြစ် အရွေးခံနိင်ရန် မဲဆွယ်စည်းရုံးလျက်ရှိ၏။ ထိုအချိန်က တစ်ပြည်လုံးသည် သံဃာတော်များကို အထူးလေးစားအားထားနေကြချိန်ပင်။ အရာရာနီးပါးကို သူတို. ကိုးကွယ်သည့် ဆရာဘုန်းဘုန်း ပြောသမျှ ဖြစ်၏။
ထိုအချက်ကို ရိပ်စားမိသော လူပါး သမ္မတလောင်း နိင်ငံရေးသမားက အတော်အတန် သြဇာအာဏာညောင်းသော ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးထံချဉ်းကပ်ပြီး သူသမ္မတဖြစ်လျှင် ဤမြို.နယ်တွင်ရှိသော လမ်းများအားလုံးကို ကတ္တရာခင်းပေးမည်။ အထက်တန်းကျောင်းကြီးများ ဆောက်ပေးမည် စသည်ဖြင့် မစားရ ၀ခမန်း ပြောကာ စည်းရုံး၏။
ဆရာတော်ကြီးလဲ ထိုသူ၏စကားကိုယုံပြီး သမ္မတကောင်း၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ပေလိမ်.မည်ဟု ယူဆကာ သူ.ကိုကိုးကွယ်သော ဒကာ၊ ဒကာမအားလုံးအား မဲပေးရန်တိုက်တွန်းလိုက်၏။ ထို.ကြောင့်ပင် ထိုနိင်ငံရေးသမားမှာ မဲနိင်ကာ သမ္မတကြီးဖြစ်သွားလေသည်။
သမ္မတသက်တမ်းသာ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ကုန်လာသော်လည်း လူလည် အာဏာရူး သမ္မတကြီး၏ ကတိစကားများကား အပြောမှလက်တွေ.သို. အသွင်မပြောင်းသေး။ ထိုအခါ ဆရာတော်ကြီးက ထိုသမ္မတအား ကိုယ်တိုင်တွေ.ဆုံပြီး ကတိအတိုင်းလုပ်ပေးဖို. မိန်.တော်မူသည့်အခါ …………
ထိုသမ္မကြီးပြန်ပြောသော စကား ကား ………
“ဒီလိုသမ္မတဖြစ်လာအောင် မဲရဖို.အတွက် တပည့်တော် အမျိုးသမီးရဲ. စိန်တစ်ဆင်စာ ကုန်ခဲ့ရပါတရ်ဘုရား။ ဒါ့ကြောင့် ပထမဆုံးအနေနဲ. အမျိုးသမီးရဲ. စိန်တစ်ဆင်စာ အရင်ရအောင်လုပ်ရပါအုံးမရ်ဘုရား။ ပီးရင် တပည့်တော်တို.မိသားစု ချမ်းသာဖို.လုပ်ရပါအုံးမရ်။ ထပ်ပီးတော့ ဆွေမျိုးတွေ ချမ်းသာအောင်လဲ လုပ်ပေးရပါအုံးမရ်။ ဆွေမျိုးတွေအားလုံးလဲ ချမ်းသာတော့မှပဲ နိင်ငံကောင်းစားအောင် လုပ်နိင်တော့မရ် ဘုရား” ဟူသတတ် ……………………..
တိန် … သေဟဲ့ .. နန္ဒိယ …
ဒီလူတွေပဲ ကြီးစိုးတဲ့ ဒီလွှတ်တော်ထဲမှာ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော နောက်ဆုံးတော့ ဒီရလဒ်ပဲ ထွက်မှာပါပဲ လိုချင်တာရဖို့နဲ့ အာဏာလက်ကိုင်ရဖို့ အခြေခံဥပဒေကို တစ်အိမ်တစ်ယောက် မတက်မနေရ တက်ထောက်ခံခိုင်း ပြည်သူ့သဘောထားဘာညာ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်လုပ် နောက်ပြီး ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးတွေထဲမှာ မလိုက်မနေရ ထောက်ခံခိုင်းတာတွေ လိုသလိုပုံသွင်းပြီးတော့ ရော့ ဒီမှာ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ လက်မဲတွေနဲ့ဝိုင်းကိုင်ထားတဲ့ ပေါက်စီတစ်လုံးလောက်တောင် အနှစ်မရှိ လုပ်ချင်တာလုပ်နေကြတဲ့လူတွေကြားမှာ ငါတို့ကတော့ လွှတ်တော်ထဲရောက်ရင် ဒီလိုပြောလိုက်မယ်ဟဲ့ လို့ မောင်းတင်ထားကြတဲ့ လူနည်းစုက သူတို့ချင်းထောက်ခံရင်တောင် အောက်လွှတ်တော်မှာတင် ထောက်ခံမဲ5ရာခိုင်နှုန်းရဖို့မရှိ ( ဟန်ထူးလွင်သီချင်းလို ဒီလိုပါပဲ ဖုန်တွေကြားထဲ ယိုင်တိုင်တိုင် လှည်းကြီး မောင်းနေရတော့မှာပဲ )